Samsung dia hisolo ny Note 7 rehetra amin'ny olan'ny bateria | Androidsis
Ireo tatitra momba ireo fipoahana momba ny Galaxy Note 7 dia tsy hadino ary niely toy ny sombin-javatra tamin'ny fomba rehetra tato anatin'ny andro lasa. Samsung nivoaka haingana izy hanambara fa nikaroka ireo olana izy mba hanapahan-kevitra amin'ny farany izay hataony momba izany.
Ny fanapahan-kevitra sarotra raisina dia ny safidin'ny orinasa Koreana farany ary namoaka fanambarana ofisialy tamin'ny mpanao gazety. Samsung dia hisolo ny Galaxy Note 7 rehetra izay mety hisy fiatraikany manerantany. Modely vaovao no halefa ho an'ireo mpampiasa rehetra avy hatrany izay mamerina ny phablet, na inona na inona andro fividianana.
Mandritra izany fotoana izany ny varotra rehetra an'ny Galaxy Note7 naato mandra-pahatongan'ny fitaovana tsy misy kilema eny an-tsena ary izay tsy manana olana ihany no mivezivezy maharitra. Olana lehibe iray manohintohina ny Samsung ary amin'ity fanapahan-kevitra ity dia hiezaka ny hanalefaka azy, satria tsy lovia tsara hanina na ho an'ny mpampiasa na ho an'ny orinasa mihitsy ny fakan-tsarimihetsika mipoapoaka amin'ny fomba ratsy.
Koh Dong-jin, lehiben'ny diviziona Samsung, dia nanome toky ny mpanao gazety fa izany ihany 24 amin'ny iray tapitrisa tandindomin-doza ny fitaovana:
Tamin'ny 1 septambra, fitaovana 35 tanteraka dia nosoratana tamin'ny alàlan'ny serivisy sy serivisy fanampiana Samsung. Vita 24 fotsiny isaky ny tapitrisa no tratry ny olan'ny bateria. Satria ny fiarovana ny mpanjifanay no laharam-pahamehana, nanapa-kevitra ny hampitsahatra ny fivarotana ny Galaxy Note 7 izahay ary hanolotra maodely vaovao ho an'ny mpanjifa rehetra.
Raha namolavola ny sela misy bateria i Samsung dia naniraka orinasa hafa hanamboatra azy io ary ao amin'ny iray amin'ireo ozinina ireo aiza no hisy ny olana. Zava-dehibe ny hametrahan'ny Samsung ny fiarovana voalohany manoloana ny vidin'ny fampielezan-kevitra goavana hanoloana modely. Antenaina fa voavaha haingana ny olana, satria fotoana manokana amin'ny fifaninanana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ofisialy io, Samsung manakana ny fivarotana ny Galaxy Note 7 mba hisolo ny terminal izay voakasik'izany
Ny rindrambaiko Lock Screen Next an'ny Microsoft dia mamela ny fikarohana amin'ny Internet nefa tsy manokatra ny telefaona